Ukuswayipha kweNtlalontle: Amava oMsebenzisi onobuhlakani kwiminikelo yesisa | Martech Zone
Ukuswayipha kweNtlalontle: Amava oMsebenzisi onobuhlakani kwiminikelo yesisa
NgoLwesine, Meyi 22, 2014 NgoLwesibini, Matshi 22, 2016 Douglas Karr
Amaxesha amaninzi kwintengiso, yinto elungileyo yokuhamba kwinkqubo yokuguqula, ichonga inyathelo ngalinye kunye nokuziphatha, kunye nokuqonda ukuba zeziphi izisombululo ezinokuphunyezwa ukuze woyise. Kwimibutho yesisa, kukucinywa phakathi kwenkonzo eyenza umsebenzi kunye nexesha kunye nendawo ekuza kuyo umnikelo.
Isisombululo esivela eMisereor, the Isilayidi seNtlalo, sisisombululo esinobuchule sokusombulula imiba emibini eyahlukileyo:
Abantu abasenayo imali.
Ibhokisi yomnikelo ayiniki ukuqonda malunga noko kufezekisiweyo ngemali.
Faka iSwipe yoLuntu. Ividiyo inxibelelana nokuswayipha kwekhadi letyala lomntu onika imali. Njengokuba betyibilika kwaye benikela ngokutya, isilayi sesonka siyasikwa. Okanye xa betyibilika kwaye benikela ukulwa ukurhweba ngabantu ngokungekho mthethweni, iibhondi ezibambe izandla zomntu ziyaqhekeka. Ngokwenene isisombululo esimangalisayo.
tags: Iminikelo yesisasaUkuziphatha komnikeloIminikelogwenxaiswipe yentlalo
Intengiso yeXesha leNene ngeZapp360